China HSG01-E Series Hydraul Cylinder orinasa sy mpanamboatra | Xinrun
Fiara Teleskopika vazivazy ...
HSG01-E Series Hydraulika Cy ...
Varingarin-tsolika injeniera karazana HSG dia varingarina volo tokana miaraka amina karazana piston tokana, izay manana toetra mampiavaka ny firafitra tsotra, fandidiana azo itokisana, fivoriambe mora azo ary famafana, fikojakojana mora, fitaovana buffer ary fomba fifandraisana samihafa. Ampiasaina indrindra amin'ny milina fananganana, fitaterana, fandefasana, milina fananganana, milina fitrandrahana ary indostria hafa.
Fikarohana sy famolavolana
1.Ny orinasanay dia manana injeniera 6 manana traikefa ara-teknika 40 taona.
2.Ny varingarina hidyolaire dia be mpampiasa kokoa amin'ny indostrian'ny injeniera mekanika, ary avo kokoa sy avo kokoa ihany koa ny fepetra teknika ilaina. Ampiasaina indrindra ny karazana famaranana tsindry hanaovana ny plastika mangatsiaka vy amin'ny mari-pana ara-dalàna. Ny fampiasana fitaovana mihodina dia ny fanerena ny tampon'ny vokatra, ka ny metaly ambonin'ny vokatra dia hanana fiasa plastika, ary fenoy ao anaty lohasaha ambany be misy ny sisa tavela voalohany, mba hamokarana ilay sangan'asa Nihena ny sandan'ny vokatra. Noho ny fahasimban'ny plastika amin'ny metaly ambonin'ny tsindry vy, ny fihenan'ny hatsiaka amin'ny sosona amboniny sy ny fanitsiana ireo voa dia mamorona endrika fibrous marina. Ny hery sy ny hamafin'ilay sosona adin-tsaina sisa tavela dia nohatsaraina, ka nanatsara ny fanoherana ny harafoana sy ny fanoherana ny vokatra azo avy amin'ny workpiece.
3. Drafitra fanamarihana varingarina hydraulic:
a.Fampiasana ny fitaovana, ny toetran'ny workpiece.
b. Ireo toetra mampiavaka ny rafitra miasa, ny fepetra entina, ny takiana amin'ny hafainganana, ny haben'ny stroke ary ny fepetra takiana amin'ny hetsika.
c.Ny tsindry miasa amin'ny rafitra hydraulic.
4.We afaka manao varingarina arakaraka ny sary famantarana an'ny mpanjifa.
5.Our silinder hydraulic dia misy karazany maro, afaka manao araka ny fangatahan'ny mpanjifa, ny famaritana ary ny sary.
Ny varingarina hydraulic dia ampiasaina amin'ny mpitatitra fiara, milina famonosana, mpijinja fambolena, angadin-tsarimihetsika hydraulic turnover, sehatra manainga.
Teo aloha: Cylinder Hydraulika Excavator
Manaraka: Silinder teleskopika vita amin'ny Hydraulika
Silila Teleskopika mihetsika indroa mihetsika
Varingarin'i Hydraulika Hsg
Mihirà Cylinder Hydraulika Telescopic Acting
Cylinder Hydraulika mihetsika tokana
Varingarin'i Hydro Piston
Antsipirian'ny vokatra: 1.Hyll hidrolika tavoahangy Ny valizy vita amin'ny varingarina dia hofidiana araka ny tsindry amin'ny asa, ny hafanan'ny asa, ny toe-javatra iasana ary ny fepetra manokana hafa. 1.1 Tube varingarina: fantsona vy tsy misy fangarony voatsoaka mangatsiaka, fantsom-by vy tsy misy fangarony, fantsona sandoka. 1.2 Tube fitaovana: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, sns. 1.3 Fahasarotan'ny velarana: R0.16-0.32μm 1.4 Ao anaty Chromating: Raha ilaina dia hohafanaina ao anaty fantsona ao anaty. 2.Piston rod 2.1 Fitaovana Rod: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
Silinder teleskopika vita amin'ny Hydraulika
Product Detail Hydapour flap dia karazana fitaovana maoderina mamoaka entana. Raha mbola tohanana dia afaka mamoaka fitaovana mandeha ho azy sy mivantana. Ny fahombiazan'ny famoahana entana dia avo dia avo ary ny vovoka dia kely kokoa. Ny dumper dia mila manomboka ny motera fiantsonan'ny hydraulic mba hampisondrotra ny sandan'ny tsindry amin'ny toerana avo, ary avy eo ny fiara gondola feno entana dia sintomin'ny milina mavesatra fitondra mandehandeha, ary eo amin'ny fiara manohana ny dumper no misy azy. Ny vibrator vilia aoriana dia pus ...